Kule minyaka engamashumi amabili, ethandwa kakhudlwana phakathi abahambi okhuthele uwina cruise ezokuvakasha. Ngemva eyodwa uhambo, ungakwazi ukuhlola eziningana emazweni. Futhi ngokungafani izinkambo ibhasi, uhambo zizokwenzeka induduzo ship. Musa usuka ehhotela ehhotela, futhi ihhotela lakho ngeke ukubhukuda nawe.
Ngakho ukuthi kukhona ihhotela! Modern kufika imikhumbi - kuyinto resort. ibhodi kwawo konke ukuzijabulisa: amachibi, zokudla, nemishayo, ukuzivocavoca, zokubukela amabhayisikobho, izitolo kanye nokunye okuningi.
Kufanele kuqashelwe ukuthi izivakashi uhambo ngomkhumbi, wasindisa kusuka ekubeni ibhekane eside wezifiki nenqubo yokuqhutshwa imingcele emazweni siwela yibo. A cruise eScandinavia alikhulumi nanokukhuluma zidinga ukuba ashiye izwe ukuze uthole emkhunjini. Phela, ukuya ekuhambeni, unga ngokuqondile Petersburg. Futhi emuva lapho, beqabulekile futhi egcwele esiqala emihle.
Cruise ukuze eScandinavia: ngobuhle nangobubi bawo
Inzuzo enkulu ukuhamba ngemikhumbi - kuba induduzo. Mayelana neklasi kumakhabheni ku kufika imikhumbi kanye izikebhe kuzoxoxwa ngezansi. Kodwa ngisho kakhulu isabelomali indlela hlala kusikisela nekamelo lokugezela yangasese, air conditioning, kanye izindawo ezifanayo.
Plus Cruises kungenziwa ngokuthi nalokho ongakwenza wena ukuhlela uhambo lwakho. Phela, nabo basuke zihlukile kokubili indiza ubude kanye izwe Ukusabalala. Kukhona Cruises ukuthi ukuhamba ngomkhumbi ithatha ingxenye encane isikhathi futhi ugxile uhambo amatheku yokupaka (ngisho ngebhasi maphakathi nezwe).
Ungakhetha indiza kuphela engumakhelwane Finland. Kodwa babuye babe nethuba lokupha ukuthatha cruise ku emazweni aseScandinavia, ukubiza eDenmark ngisho e-Iceland futhi ziyabuya ukuvakashela ngisho namazwe aseBaltic.
A Ububi a ezingezwakali sezulu, ungabiza lolu hambo. Zingena kule aseBaltic nasengxenyeni North kwezilwandle, wena cishe ukuphumelela.
Ngomqondo onabile, inkulumo navigation kulolu lwandle kwenziwa unyaka wonke. Kodwa Cruises eScandinavia has zonyaka yaso ephezulu ongaphakeme. Lolu hambo kujabulise kakhulu kuzoba phakathi nezinyanga zasehlobo. Ungakwazi ukujabulela zasebusuku ezimhlophe, lapho elibuhlungu kodwa amahle bemvelo enyakatho ubukeka engacaci kuze kube yimanje eheha abantu besilisa. Evumayo esihamba beyoba ngoMeyi ngenxa eside nosuku. Ngo-September, ungakwazi futhi iqalisa cruise. Lokhu kulandelwa ukwehla ukufunwa lesi siqondiso. Kodwa ngo-pre-Christmas inkathi (eYurophu nase uwumkhosi womhlaba wonke uwela ngoDisemba 25) Cruises futhi zithandwa kakhulu. Akukho lutho ezithakazelisayo ezingaphezu kuka ukugubha uNcibijane osemkhunjini seagoing.
Facilities ku ibhodi
Njengoba kunjalo kubo bonke ehhotela, emphemeni of ship egcwele onamakamelo lwezigaba ezahlukene. Kakhulu isabelomali inketho - owawuholela kwelinye ikamelo elincane phakathi. Ngenxa yezizathu ezisobala, abanayo amafasitela. kumakhabheni Ibhajethi ngesikhathi buhlalu portholes round, okuyinto zitholakala endaweni emgqeni amanzi. bona ezibizayo, nakuba wonke amanye Izinsiza bamunye. On emphemeni ongaphezulu zitholakala egumbini nekilasi ephakeme. Kuye ekilasini umkhumbi, banayo samakamelo amancane, Suites ngisho Suites. Lovers ukuhamba induduzo ukusetshenziswa zokuhlala etholakala emphemeni yangasese, mini-bar futhi enwetshiwe Igumbi inkonzo.
Kusukela Petersburg, ungathatha cruise isikebhe eScandinavia. Yini lolu hlobo isitsha lihlukile liner evamile? Kuphela izinga ephakeme kanye neqiniso lokuthi ungakwazi ukuthenga ithikithi kusuka kwelinye iphuzu eya kwelinye, kodwa akuyona yonke eqhubeka nohambo. Njengomthetho, kukhona isikebhe emphemeni kulabo abagibeli futhi enezinto zokuhlala. Kodwa ngokuya okunethezeka nenduduzo izinhlobo imikhumbi akahlukile.
Yiziphi Cruises ukuba eScandinavia kusukela Petersburg
Isikebhe uhambo ngokuvamile zihlukaniswe izinhlobo ezimbili: izihloko nezimbobo; nobuhle bemvelo. Kususelwa kule futhi uhambe emzileni zizohluka. Esimweni sokuqala, lezihambi uzokwazi bajwayelane isiko, izakhiwo kanye umlando emadolobheni ezifana Helsinki, Stockholm, Oslo, Turku. Kukhona Cruises ukuthi omunye eScandinavia akuzona elinganiselwe. Esikebheni kwakuneqembu izitsha ezinjalo ungavakashela Riga futhi Tallinn, Aarhus futhi Copenhagen (Denmark), Glasgow ne-Edinburgh (Scotland) kanye Reykjavik (Iceland).
Uhlelo we Cruises in the aseBaltic nasengxenyeni North Pacific, lapho legumbi ubeke ubuhle bemvelo, ihlinzeka inqamule amawa yeNorway isethwe esiqhingini Gotland, Frisian kanye Aland ziqhingi.
Cruise ukuze eScandinavia - a okukhulu-value amasevisi. Yiqiniso, uhambo ulwandle kuyokulahlekisela eqolo ngaphezu kwanoma ukuvakasha ibhasi. Kodwa induduzo kuyazuzisa yini ngempela. Intengo ye-cruise incike ubude bayo, Ukusabalala ndawo, inombolo yezindawo yokupaka ethekwini. Elibalulekile indima kwesabelomali uhambo, kanye nemidlalo lo ezikhethiwe ekilasini apholile. Ukudla (kathathu ngelanga plus Ungadla) emananini uhambo. Futhi, izithombe kanye ukuzijabulisa emananini. I emfushane isikhathi Cruises - kwezinsuku ezimbili. EseHelsinki baya eTallinn, ungaya 70 Yebo umuntu, Petersburg uhambo - Åland Islands - Petersburg izobiza eziyikhulu euro umuntu ngamunye. Tour ngoba nanye izinsuku kakade ayelingana cishe 1600 zamadola.
Yini abahambi bathi mayelana cruise kuya eScandinavia? Uphenyo kulolu hambo le nomdlandla kakhulu. Ngisho noma abantu nje lisuswe kusuka kwelinye iphuzu eya kwelinye ebhodini cruise isikebhe, bakhuluma mayelana uhambo kahle kakhulu. Ukudla kuyamangalisa ebhodini ngobuningi. Ngaphezu kwalokho, njalo uqhuba uhlelo ukuzijabulisa, okuyinto livulekele bonke abagibeli bomkhumbi, kungakhathaliseki ekilasini gumbi. Eminye imikhumbi babe ebhodini yonke emphemeni duty izitolo khulula nokukhetha imikhiqizo hypermarket. Inkantini, izindawo zokudla, ebusuku amaqembu, ema-disco, ukuzivocavoca, ama-sauna, amachibi ukubhukuda - zonke Izinsiza zinzima kakhulu kubala. Njengoba siqhubeka nohambo wale mikhumbi kungenziwa uma iqhathaniswa naso sonke ehhotela resort.
River cruise umkhumbi "Dmitriy Furmanov": incazelo imizila. Ukuhamba ngesikebhe
Haddock, ephekwe eziko, hhayi kuphela ...
I-KamAZ-4310 - imoto ephethe impi
Ukucekelwa phansi kwempahla
Club "Attica": Moscow, e-Irkutsk, Barnaul. Izibuyekezo
Ukufaka emotweni ngezandla zabo: Amathiphu Imiyalelo
Umuthi 'Laferon ": yokusetshenziswa, izinkomba, incazelo izidakamizwa, ukubuyekezwa